Serge Zafimahova “Tokony hohalavaina ny fotoam-piasan’ny Ben’ny tanàna”
Araka ny fanazavana nentin’Atoa Serge Zafimahova, dia tsy tokony hatao ny fanendrena PDS, fa halavaina ny fe-potoana hitantanan’ireto Ben’ny tanàna am-perinasa ireto.
Hovaina ny lalàmpanorenana sy ny loabary an-dasy, ka ny raiamandreny ao amin’ny FFKM sy ireo rantsa-mangaika eto amin’ny tany sy ny firenena no mitarika izany, handinihana io lalàmpanorenana sy ny fanitarana ny asan’ny mpitantana ny tanàna io, hoy hatrany ny fanazavany.
Mikasika ny rafi-pampianarana niova indray dia tokony hisy ny “débat au fond” handinihana io fampianarana io, fa lasa potika tanteraka sy lasa kitoatoa ny fomba hitantanana ny fampianarana. Nambarany, fa efa simba ny fampianarana tamin’ny fitondrana tetezamita, dia nitohy tamin’ny fitondran’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izany, dia izao dia mbola tadiavina hopotehina ihany koa, hoy izy. Milà fahamatorana ary tsy atao andrana fa mamotika ny firenena izao fanovana ny rafi-pampianarana izao. Ny mpampianatra fram no lasa maro any amin’ny tontolo ambanivohitra, fa ny 95 isan-jaton’ny “titulaire” dia mivangongo eto an-drenivohitra fotsiny.